အနာဂတ်မှာ ပွင့်လန်းမည့် သစ်ပင်စိမ်းလေးများအတွက် ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ကမ်းလက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အနာဂတ်မှာ ပွင့်လန်းမည့် သစ်ပင်စိမ်းလေးများအတွက် ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ကမ်းလက်များ
အနာဂတ်မှာ ပွင့်လန်းမည့် သစ်ပင်စိမ်းလေးများအတွက် ဒါဇင်ပလက်စ်ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ကမ်းလက်များ
Posted by အာဂ on Nov 7, 2012 in Creative Writing, Myanmar Gazette, Photography | 20 comments
DozenPlus ဒါဇင်ပလက်စ် အလှူ
ကျွန်တော့်တို့ ဒါဇင်ပလက်စ် အဖွဲ့သူအဖွဲသားတွေအပါအ၀င် အခြားသော စေတနာရှင် ၊ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ ပညာကမ်းလင့် ကုသိုလ်ရေးအလှူဖြစ်တဲ့ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အလှူကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေ မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်း ကျောက်တန်းမြို့၊ မြိုင်သာယာ (၁)ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဇမ္ဗုဥသျှောင် သီလရှင်စာသင်တိုက် နှင့် (ပရဟိတ) သီလရှင်သင်(အခမဲ့)ပညာရေး ကျောင်းမှာသွားရောက်လှူတန်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ သီလရှင်စာသင်တိုက် ကို ဆရာလေး ဒေါ်နန္ဒသင်္ဂီနဲ့ ဆရာလေး ဒေါ်ဝိမလစာရီ တို့က တဲကျောင်းလေးကနေတဆင့် ယခုလိုအခြေအနေအထိရောက်အောင်လို့ ၂၀၀၆ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။(တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ ဒါဇင်ပလက်စ်အဖွဲသားတွေသွားလှူတဲ့ နေ့က ကျောင်းရဲ့ ၆နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခါသမယဖြစ်နေပါတယ်။) အဲဒီကနေ တစ်ဆင့် ဆရာလေး နှစ် ပါးရဲ့ စေတနာတွေကြောင့် အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်းကိုတော့ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပညာဒါန အခမဲ့ ပညာသင်ကျောင်း ကို ဖွင့်လှစ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များကတော့
၁။ ပညာအမှန်တကယ်တတ်မြောက်လိုသော ပညာမတတ်သူများအား ပညာရေး ရည်မှန်း ချက်ကို အထောက်အကူပြုစေရန်။
၂။ဆင်းရဲ၊ချမ်းသာမရွေး လမ်းမှားမရောက်စေရန်နှင့် သာသနာ့ အာဇာနည်များ ထွန်းကားပေါ်ပေါက်စေရန်။
၃။မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော် အရှည်ခံ၍ တည်တံ့စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားသော အမျိုးသမီးငယ် ကျောင်းသူများအား သီလရှင်အဖြစ် ချီးမြှင့်၍ လောကုတ္တရာစာပေနှင့် အထက်တန်းကျောင်း ပညာများအထိသင်ကြားပေးရန်။
၄။ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသော ကလေးငယ်များအား ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင် အောင် မြေတောင်မြှောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်။
စတင်တည်ထောင်စဉ်ကာလမှာ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသား။ အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပေမဲ့ ယခုအချိန်မှာ တော့ စာသင်သူ၊စာသင်သား စုစုပေါင်း ၆၀၀ ရာကျော်နီးပါရှိနေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ယခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ စာသင်တိုက်မှာ အခြေခံစာပေများ ၊လောကုတ္တရာစာပေများကို သက်ငယ်၊လတ် ကြီးမရွေးသင်ကြားပေးပြီး။ မူလတန်းမှ ပဉ္စမတန်း အထိ ကျောင်းမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ မိဘမဲ့ နဲ့ ဆင်း ရဲ နွမ်းပါးတဲ့ ကလေးငယ်တွေအားလုံး အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဗလာစာအုပ်မှ စလို့ စာရေးကရိယာတွေကို အခမဲ့ လှူတန်းပေးပြီး ပညာဒါနပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။နောက် ဒီကျောင်းမှာ သီလရှင် ၀တ်လိုသူတွေ အတွက်လည်း ဆွမ်း၊၀တ်စုံ ကအစအခက်အခဲမရှိအောင်လှူတန်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ဆရာလေးရဲ့ဆုံးမသြ၀ါဒကို ခံယူနေကြသော ဒါဇင်ပလပ်စ်အဖွဲ့သားများ
အဆိုပါ ဆရာလေးတို့ ရဲ့ မြတ်သောအလှူဒါန လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာ တစ်တပ်တစ်အား အားဖြည့်ကူ ညီဖိုအတွက် ဒါဇင်ပလက်စ် အဖွဲ့သားတွေအပါအ၀င် အလှူရှင်များရဲ့ ထည့်ဝင်လှူငွေ ကျပ် ၁သိန်း ၆သောင်း နဲ့ ဗလာစာအုပ် ၄၂ ဒါဇင်(အုပ်ရေ ၅၀၄အုပ်) ဘောပင် ၅၁၀ ချောင်း(ငွေကျပ်- ၉သောင်းဖိုးတိတိ) တို့ကို ဆရာလေး ဒေါ်နန္ဒသိဂီ င်္ထံပေးအပ်လှူတန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆရာလေး အပါအ၀င် သီလရှင်များက လှူဒါန်းမှု အစုစု အတွက် မေတ္တာပို့ အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒါဇင်ပလက်စ်အဖွဲ့သားများရော အခြားအခြားသော စေတနာရှင်များအားလုံးရော။ ဂေဇက်ရွာသူ၊ရွာသားများအားလုံးအတွက်ပါ အမျှပေးဝေပါတယ်။ အမျှရကြ၍ သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေသတည်း…။
ပုံတွေ ပျောက်နေတယ် နဲ့တူတယ် နော် ကိုအာဂ ရေ ။
ပုံ မမြင်ရသေးပေမဲ့လည်း ..
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ ..
ဓါတ်ပုံတွေ ဘယ်သူခိုးသွားပါလိမ့်.. :bar:
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု။ ဒီပုံတွေ Etone ဆီမှာ မြင်ကတည်းက သဘောကျ ကြည်နူးနေတာ။
လစဉ်ခြေလှမ်းမှန်မှန်ကြီးချီတက်နေတဲ့ ဒါဇင်ပလပ်စ် ကို ကောင်းချီးသြဘာပြုလိုက်ရပါကြောင်း…
ကွန်မန့် တင်လိုက်မှ ဓါတ်ပုံမြင်ရတယ်…ဆောဒီး :hee: :harr:
ပွင့်သောပန်းတိုင်း လန်းပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလျက်။
ပုံတွေက အခုမှမြင်ရတယ်..စတင်တင်ချင်း ပုံမမြင်ရဘဲ မှန်းပြီး သာဓု ၃ခါ ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်…
အူးဗိုက်ကလည်း အမြှောက် တစ်သိန်းထက် အလှူငွေ တစ်သိန်းဆို ပိုကောင်းမယ်နော့။ အဟီး။။
သုံးကြိမ်ပြည့်အောင်ခေါ်သွားပါတယ် ညီလေး အာဂရေ…။
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ရပီး အခုလိုပြန်မြင်ရတော့ ပိုပီးပီတိဖစ်ရပါတယ် …. ဒါဇင်ပလပ်ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
သောက်ဖော်သောက်ဖက်ကြီးရေ …… သာဓုပါချင့် ……..
မသောက်ရတာအတော်ကြာ မတွေ့ရတာအတော်ကြာပေ့ါနော် ………..
ဘယ့်နှယ်… သများအလှူလာပြီး သောက်ဖော်သောက်ဖက်သတိရနေတယ်…ဟိ
ဒါဇင်ပလပ်စ်ရဲ့ လစဉ်ခြေလှမ်းလေးတွေကိုတော့ဖြင့် မှန်မှန်နဲ့ သေသေချာချာလျှောက်လမ်းပါမည်ဟု…
အဟီး မခိုင် တစ်ပွဲတစ်လှမ်းတော့ တွဲပြီး သောက်လိုက်ချင်ပ…။ ဒါပေမဲ့ မခိုင်ဗိုက်ထဲက အနော်ချွေးမလေးကို အားနာလို့ သောက်တော့ဘူးနော်..။
(သာဓု)3ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော် ……. ဒါဇင်ပလပ်စ်ရဲ့ နောက်ထပ် နောက်ထပ် အလှူများကိုလည်း
ကို ကထူးဆန်း ။လေးကြီးမိုက် ။Khaing Zar Win အနော့် အမှားကြောင့် ပထမ ဓာတ်ပုံတွေမမြင်ရတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကိုဖက်ကတ် ကျေးဇူးကြောင့် ပုံတွေ ပြန်တတ်လာပါဘီ..။ ဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ။်
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ …
သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ပါဗျို့ ..
ခုလို လှူဒါန်းတာတွေကို မြင်တွေ့ရတော့
စိတ်ထဲ ပိတီ ဖြစ်မိပါတယ်ဗျို့ ..
ဒါဇင်ပလပ် အဖွဲ့ပြုတဲ့ ကုသိုလ်အဖို့ကို ..
သာဓု ခေါ်ရင်း ဝေမျှယူသွားပါတယ်ဗျို့ ….
ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ သာဓုအနုမောဓနာခေါ်ဆိုအပ်ပါတယ် ကိုအာဂရေ..။
နောက်များကြုံဆုံတဲ့အခါ လိုက်ပါလှူတန်းချင်ပသေးတယ် ဒါဇင်ပလပ်ရယ်..။
နောက်များကြုံဆုံတဲ့အခါ လိုက်ပါလှူတန်းချင်ပါသေးတယ် ဒါဇင်ပလပ်ရယ်..။